Laacibkii hore ee Brazil Robinho ayaa maxkamad ku taala Talyaaniga ku xukuntay 9 sano… – Hagaag.com
Laacibkii hore ee Brazil Robinho ayaa maxkamad ku taala Talyaaniga ku xukuntay 9 sano…
Posted on 10 Maarso 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxkamadda racfaanka ee Milan ayaa qirtay ama xaqiijisay xukunka 9-ka sano ah ee lagu riday laacibka reer Brazil ee Robinho, weeraryahankii hore ee kooxaha Real Madrid, AC Milan iyo Manchester City.
Robinho (37 jir) – oo lagu xukumay “dambigiisii” sanadkii 2017 – waxaa lagu xukumay bishii December 2020 ka dib markii uu ka qayb qaatay kufsi wadareed ka dhacay Talyaaniga 2013.
Maxkamaddu waxay go’aamisay in Robinho uu “garaacay” isla markaana “si bahalnimo ah u bahdilay” gabadh u dhalatay Albania oo u dabaaldegeysay sannad-guuradeeda 23-aad ee habeenkii shilku oo ka dhacay meel caan ah oo ku taal magaalada Milano, sida uu qoray wargayska Talyaaniga ee La Repubblica.
Robinho wuxuu haystaa 45 maalmood inuu racfaan uga qaato Maxkamadda Sare ee Cassation, maxkamadda ugu sarreysa ee racfaanka ee dalka Talyaaniga, ama maxkamadda ugu dambeysa ee la magan galo.
Kooxdii ugu dambeysay ee uu ku biiro laacibka reer Brazil Robinho ayaa aheyd Santos, oo uu hadda ku nool yahay halkaas, waxaana la ogyahay in Brazil aysan dhiibin muwaadiniinteeda, tanina waxay ka dhigan tahay in laacibkii hore ee reer Brazil aan la ciqaabi doonin.
Kooxda reer Brazil ayaa hakisay qandaraaskiisa Robinho ka dib markii lagu helay kiiskan ka dib markii mid ka mid ah shirkadaha maalgaliya ay joojiyeen xiriirkii ay la lahaayeen Santos sababo la xiriira qandaraaska uu la saxiixday Robinho, laakiin madaxweynaha Santos ayaa xaqiijiyay in haddii eedeyntan lagu caddeeyo Robinho, uu qandaraaska uu kula joogo kooxda la baabi’in doono.
Robinho ayaa wuxuu si isdaba joog ah u xaqiijiyay inuusan wax dambi ah lahayn, kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa wareysi uu siiyay channal-da Brazil ku yaala dhamaadkii sanadkii hore ayaa sheegay inuu kaliya la hadlay gabadha oo uu ku laabtay gurigiisa, saaxiibadiisna aysan kufsan, laakiin wax waliba ahaa wax la isla oggol yahay, ka hor inta uusan ku adkeysan inuusan ku hadli karin magacooda.